Olee otú dọwara Audio CD na VLC?
Olee otú dọwara Audio CD na VLC
Ị nwere ike amasị na-agba ọsọ audio CD s na gị usoro na-egwu ya na-eji VLC Player. The oké ihe banyere VLC ọkpụkpọ bụ na i nwere ike ime ndị ọzọ ihe na ya na dị nnọọ ege egwú ma ọ na-ekiri ọkacha mmasị gị nkiri. VLC-enye gị ohere dọwara audio CD ịzọpụta ọkacha mmasị gị album na gị usoro.
Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eji nke a mma, isiokwu a ga-aka. Na-agụ na ka fin otú i nwere ike iji VLC dọwara audio CD.
Part 1: Olee dọwara audio cd iji VLC on windows?
Part 2: Olee dọwara audio CD iji VLC on Mac?
Part 3: Iji Wondershare TunesGo
1. Open VLC ọkpụkpọ na itinye gị CD n'ime kọmputa si disk mbanye. Ugbu a gaa Media menu na-emeghe tọghata / Save nhọrọ.
2. Họrọ disk taabụ na n'elu na pịa emeghe media. Na-audio CD disk igbe ticked. Ị nwere ike họrọ tracks ị chọrọ dọwara si CD. Ozugbo i họrọ dị nnọọ pịa N'ọgba iji dobe ala menu na tọghata / Save.
3. Na-esote window, họrọ mmepụta njedebe nke faịlụ na aha ya. Mgbe ede jide n'aka na ị ịgbakwunye ndọtị nke usoro iji aha ahụ. N'okpuru ntọala jide n'aka na ị họrọ profaịlụ mp3 ma ọ bụ ndị ọzọ họọrọ audio format ịzọpụta tracks on mmepụta cd faịlụ.
Dị nnọọ eso ndị a ntụziaka na ị niile set!
4. Ugbu a dị nnọọ pịa Malite bọtịnụ dọwara ọdịyo cd. Ị nwere ike soro ndị ọganihu na isi interface.
Oge a chọrọ maka ripping na CD-adabere na mbanye na nke nke faịlụ.
The usoro maka ripping audio cd na Mac bụ na dị iche iche, dị ka VLC interface na ndị ọzọ na anaghị agbanwe ukwuu. Otú ọ dị, ka na-unu site na usoro ebe a bụ nzọụkwụ na-eso na Mac.
1. Launch VLC ọkpụkpọ na fanye audio cd ị chọrọ dọwara n'ime kọmputa si disk mbanye. Malite site na ịga na File menu na-emeghe nhọrọ tọghata / Stream.
2. Na-esote ihuenyo, gaa na Open Media taabụ. Ị ga-enwe ihe dị iche iche ka. Akpa họrọ disk mbanye na họrọ audio faịlụ na ị chọrọ dọwara ị nwere ike nakwa. Ugbu a họrọ nhọrọ tọghatara si na ala.
3. Tinye faịlụ na-aga ma aha na ndọtị dị ka cd faịlụ. Jide n'aka na ị na-ahọrọ nri profaịlụ gị mmepụta faịlụ. Họrọ ma ị chọrọ ya dị ka mp3 cd ma ọ bụ ndị ọzọ na usoro.
4. Ozugbo i mere ntọala niile, dị nnọọ pịa mmalite iji malite usoro.
Ị pụrụ ịhụ gị cd faịlụ na nyere ebe on gị Mac.
Nkebi nke 3: Iji Wondershare TunesGo
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye album nkà na hazie, gị music na gị usoro Wodnershare TunesGo dị ukwuu software iji. Ọ ike ịgbakwunye efu Ama faịlụ egwu gị na ala, nke ga-ekwe ka iji hazie gị niile track. Ọ na-agụnye atụmatụ dị ka na-agbakwunye album nkà, ihichapụ oyiri faịlụ wdg N'ihi nkọwa ndị ọzọ, ị nwere ike lelee Wondershare saịtị.
> Resource> Music> Olee dọwara Audio CD na VLC?